Jurassic World: Fallen Kingdom oo HIT ka noqday gudaha Hindiya halka Kaala lagu qasaaray! – Filimside.net
Jurassic World: Fallen Kingdom oo HIT ka noqday gudaha Hindiya halka Kaala lagu qasaaray!
Filimka Hollywood-ka ah Jurassic World: Fallen Kingdom ayaa HIT ka noqday gudaha Hindiya madaama ganacsi heer sare ah uu sameenayo.
Sida muuqato filimka Jurassic World: Fallen Kingdom todobaadkiisa kowaad ee fidsan ama 8-maalmood ka kooban wuxuu gudaha Hindiya ka keeni doonaa 52 Crore ilaa 53 Crore ganacsi u dhaxeeyo waana lacag la mid ah cimri ahaantooda filimada guulaha dhex dhexaadka ah gudaha Hindiya ka gaareen soo xareeyeen ee Hollywood-ka sanadkan sida Deadpool 2 iyo Black Panther.
Filimka Jurassic World – Fallen Kingdom maal maha shaqada si wacan ayuu u gadmayaa taasina waxay ka caawin doontaa in Jimcadaan la siiyo tiyaataro ku filan ayadoo Race 3 masraxa qabsan doono waxaana u suura gali doonto ganacsigiisa in cimri ahaan uu gaaro 60 Crore ama uu kasii sare maro oo uu noqdo filimka 7-aad ama 8-aad ee Hollywood ah ee lacagaha ugu badan gudaha Hindiya kasoo xareeyo.
Fadlan hoos kaga bogo Jurassic World – Fallen Kingdom iyo ganacsiga uu ilaa haatan gudaha Hindiya ka sameeyay sida shabakada BOI soo daabacday:
Khamiis – 5.50 Crore
Jimco – 7 Crore
Sabti – 11.50 Crore
Axad – 13.25 Crore
Isniin – 4.25 Crore
Talaado – 4 Crore
Wadarta Guud – 45.50 Crore (Trade Figure)
Dhinaca kale Superstar Rajinikanth filimkiisa Kaala jab weyn ayaa ku dhacay madaama Koonfur Hindiya laga diiday iyo dhamaan gobolada kale ee Hindiya.
Kaala todobaadkiisa kowaad wuxuu keeni doonaa 90 Crore gudaha Hindiya dhamaan luqadaha lagu daawaday kadibna meel uma socdo madaama maal maha shaqada uu hoos u dhac waali ah sameenayo.
Kaala oo ay kooxda cajaladaha qeybiyaan ku iibsadeen 165 Crore dibad iyo dal waxaa lagala kulmi doonaa qasaaro xoogan weliba kooxaha cajaladaha qeybiyeen dhanka Koonfur Hindiya waxay la kulmi doonaa qasaaro ah 35 Crore ilaa 40 Crore inay ka lumi doonto!
Fadlan hoos kaga bogo Kaala iyo ganacsigiisa dhamaan luqadaha gudaha Hindiya looga daawanayo oo ay shabakada BOI isku dartay:
Khamiis – 20 Crore
Jimco – 14 Crore
Sabti – 14.50 Crore
Isniin – 8.50 Crore
Wadarta Guud – 73 Crore (Trade Figure)